Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : လွယ်မယောင်နှင့်ခက်သောအင်္ဂလိပ်စာလုံးများ
What’s inaname?ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Sheakspeare ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Romeo And Juliet ထဲမှာ
What’s inaname?ကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်“နံမယ်ထဲမှာဘာရှိလဲ”ပေါ့။အဲဒီလိုတိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်ရင်
နာမည်ထဲမှာဘာရှိလဲလို့တတွတ်တွတ်ရွတ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။Romeo and Juliet ပြဇာတ်ထဲမှာJuliet
နှင်းဆီဆိုတဲ့အမည်ကိုမခေါ်လည်းသူ့ရနံ့ကပျောက်မသွားပါဘူး။ဆိုလိုတာကနှင်းဆီဆိုတဲ့အမည်ကဘယ်လောက်များအရေးကြီးလို့လဲ။သူ့ကိုတခြားအမည်ပေးလိုက်လည်းသူ့ရနံ့ကပျောက်မသွားပါဘူး။ဒါဆိုရင်What’s inaname? ဆိုတာ“နာမည်ကဘာအရေးကြီးလဲ”လို့ဆိုလိုလိုက်တာပါပဲ။
For Your Eyes Only. ။ဒါက James Bond ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတိုက်ရိုက်ဘာ
“သင့်မျက်စိဖြင့်သာ”(For Your Eyes Only)လို့ရေးထားရင်ဒါကမင်းတစ်ယောက်တည်းကြည့်ဖို့၊ဖတ်ဖို့
မေမေကြီးကဆက်ပြီးမှတ်ချက်ချပြပါတယ်။What’s inaname?, For Your Eyes Onlyဆိုတဲ့စကားလုံး
“Were I anything but what I am, I would wish me only he.”တဲ့။
ကျွန်မနဲ့မေမေကြီးအဲဒီအကြောင်းတွစကားစပ်မိရင်Shakespeareရဲ့ Julius Caesar ပြဇာတ်ထဲက
“The Evil that men do”ဆိုတဲ့စာကြောင်းဆီကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာရောက်တိုင်း
ဒီစကားလုံးကိုပြောခဲ့သူက Antony ဖြစ်ပါတယ်။Julius Caesarရဲ့အလောင်းကိုလူတွေရှေ့မှာချရင်း
ကျွန်မတို့အခုလိုစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ကောက်လိုက်ရင် The evil that men do,
lives after them. ဆိုပြီးမူရင်းစာကြောင်းကိုပြန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ကလွယ်လင့်တကူ
The evil that men do လို့ဆိုလိုက်ရင်ဒါအလိုလျောက်သူ့အဓိပ္ပါယ်ပါပြီးသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ပွဲတွေတက်ရတော့မယ်ဆိုရင် The Evil That Men Do ဖြစ်မယ်နော်လို့သတိပေးကြပါတယ်။ဘာ
အဓိပ္ပါယ်လဲလို့တစ်ယောက်ယောက်ကမေးရင် What’s inaname? For Your Eyes only, တို့လို
ကျွန်မဖေဖေသင်္ချာဆရာကြီးမှာလည်းပြောစမှတ်တွင်လောက်တဲ့The Evil That Men Do ဥပမာရှိပါ
နောက်Shakespeareရဲ့ကမ္ဘာကျော်စကားလုံးဖြစ်တဲ့“To be or not to be”ဟာဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်
လေးနဲ့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဖို့ခက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Hamlet ပြဇာတ်ထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါ
တယ်။စာကြောင်းအပြည့်အစုံက“To be or not to be, that isaquestion” ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာကြောင်းဟာ“စာဖတ်ရင်ကောင်းမလား၊အိပ်ရင်ကောင်းမလား”ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စားရင်ကောင်းမလား၊မစားရင်ကောင်းမလား၊ဒီအလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းမလား၊ကျောင်းပဲတက်ရင်ကောင်းမလား။သွားရင်ကောင်းမလား၊မသွားရင်ကောင်းမလားစသည်စသည်ဖြင့်ကြိုက်ရာထည့်လို့ရတဲ့အတွက်အဓိပ္ပါယ်များစွာအကျူံးဝင်နေပါတယ်။သူ့မူရင်းကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုဖို့စဉ်းစားနေမယ့်အစားတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ချီတုံချတုံဖြစ်နေတဲ့အခါ“To be or not to be”လို့ညည်းလိုက်ရင်ဒါဟာလုံလောက်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
Hairy Joe ဆိုတဲ့ရေဒီယိုပြဇာတ်တစ်ပုဒ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြဇ်ာရေးဆရာက Sol Panitzဖြစ်ပါတယ်။ပြဇာတ်
“They all makeafree man so tall.”
ဘဘကြီးကဒီကဗျာတစ်ပိုဒ်လုံးမှာအခက်ဆုံးကဒီ tall ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မဒီစာကြောင်း
There is no freedom too small,
Every man is as good as another,
And they all makeafree man so tall.
Posted by Maung Yit at 3:10 PM
ကောင်းပါတယ်။ ဒီိလိုမျိုးလေးတွေ မဖတ်ဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ။ Thanks !
လွယ်မယောင်နဲ့ခက်၊ တိမ်မယောင်နဲ့နက် တဲ့ အင်္ဂလိပ်အသုံးလေးတွေအတွက် ဘာသာပြန်ဆိုမှုအတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးပြထားတာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ပညာယူမှတ်သားရပါတယ်ရှင်။
For Your Eyes Only ကို လျှို့ဝှက်ချက်အဓိပ္ပါယ်လည်းပါဝင်စေပြီး "မင်းတစ်ယောက်သာသိပါစေ" လို့ ပြန်ဆိုသုံးတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
မြန်မာစကားလုံးတွေမှာလည်း တစ်ခုခုကို လုပ်သင့်သလားမလုပ်သင့်လား ဇဝေဇ၀ါ မပြတ်မသားဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်မိလိုက်/ လုပ်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးရယ်လို့တွန့်ဆုတ်လိုက်နဲ့ ယတိပြတ် မဆုံးဖြတ်နိုင်ရှာပဲ ချီတုံချတုံ ဖြစ်တတ်တာရယ်၊ ဟိုဟာကိုလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး ဒီဟာကိုလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး စိတ်အတွေးတွေ လူးလာဆန်ခပ်(လူးလာတုန့်ခေါက်)ဖြစ်နေတာ ကွာခြားချက်ရှိလေမလား တွေးမိပါသေးတယ်။
အထက်က နှစ်မျိုးလုံးဟာ ထပ်တူ တူခြင်လဲတူမယ် ကွဲခြင်လဲကွဲပြားမယ် ဒါပေမယ့် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီး ဆောက်တည်ရာမရ တုန်လှုပ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထပ်တွေးမိပြန်တော့
ဘာသာခြားမှတဆင့် ကိုယ့်ဘာသာစကားဖြင့် ဆီလျော်ပြေပျစ်အောင် ပြန်ဆိုပေးနေကြတဲ့ မမတို့အားလုံးကို အထင်ကြီးလေးစားကာ အားကျမိပါတယ်ရှင်။
To Saya Paragu